Tapaka tanteraka ny herinaratra teto Antananarivo, omaly tolakandro. Antony, tapaka ny tambajotra roa mitondra herinaratra mahery vaika avy any Andekaleka, mamatsy ny tambajotra iraisan’Antananarivo (RIA). Efa niverina tamin’ny laoniny tamin’ny ankapobeny ny herinaratra, minitra vitsy taty aoriana. Nisy kosa anefa ny faritra vitsivitsy tapaka toy izany koa ny nanomboka ny takarivan’ny alakamisy 12 novambra ary tsy mbola niverina ny asabotsy 14 novambra maraina, toy ny teny Amboditsiry Marais Masay. Anisan’ny mampitaraina ny mpanjifa, ny valiteny ao amin’ny laharana 3547, milaza fa “efa raisin’ny tompon’andraikitra”, na koa hoe “marobe ny mitaraina aty aminay ka tsy araka”.
Mangataka ny hametrahana CMR (Centre des métiers ruraux) tohanan’ny tetikasa Formaprod ny faritra Analamanga. Nambaran’ny filankevi-paritra momba ny fampiofanana ara-pamokarana any ambanivohitra, Analamanga, fa io CMR io ny mamaritra miaraka amin’ny tompon’andraikitra eny amin’ny faritra sy ny tanora, orinasa, rafitra, sy tetikasa misy ny asa mety azo tanterahina ao amin’ny faritra misy ny tanora. Manampy amin’ny torolalana samihafa ireo rehetra ireo, satria ny ao amin’ny distrika iray, ohatra, mahalala tsara ny lalam-piharina azo tanterahina.
Anatin’ny fifampiraharahana amin’ny Cites ny fanjakana malagasy momba ireo hazo sarobidy tratra saika naondrana. Manaja ny fanapahan-kevitry ny fanjakana ny Cites, manaiky izay fepetra noraisina amin’ny fampiasana ireny hazo ireny. Efa nisy moa nampiasana tamin’ny fanarenana ny Rova. Voararan’ny lalàna izao ny famoahana hazo sarobidy mbola tsy voadio (brut). Dinihina eny amin’ny filankevitry ny minisitra ny fampiasana ireo hazo sarobidy ary haroson’ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy, hahazo fankatoavana avy amin’ny Cites. Miato kosa ny fitsarana momba ireo hazo any ivelany, izay efa nandalo ny ladoany.